Museveni oo laga cabsi qabo in Doorashada Uganda uu u adeegsado Askar u diiwaangashan Midowga Afrika! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Museveni oo laga cabsi qabo in Doorashada Uganda uu u adeegsado Askar...
Museveni oo laga cabsi qabo in Doorashada Uganda uu u adeegsado Askar u diiwaangashan Midowga Afrika!
Ugandan Formed Police Unit personnel serving under the African Union Mission in Somalia (AMISOM), attend a medal award ceremony to mark the end of their tour of duty in Somalia on July 30, 2019. AMISOM Photo / Ilyas Ahmed
Mas’uuliyiin u badan dhinacyada daneynaya in ay xilka ka gacan maroojiyaan Madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa muujinaya welwel ah in Doorashada ay u dhici karto si ka duwan qaabka loo rajeynayo oo ah mid xor & xalaal ah si cadaalad ahna loo shaaciyo natiijada.
Qaar kamid ah xubnaha Mucaaradka ayaa Madaxweynaha Museveni ku eedeeyay in uu daneynayo gacan bidixeynta Natiijada Doorashada, maadaama uu sii dareemayo sida loo daneynayo musharaxa fannaanka da’da yar oo dhalinyarada ay codkooda siin karaan.
Madaxweynaha 9-aad ee Uganda Yuweri Museveni oo waayo joog u ah xaaladda dalkiisa dan & 1986-dii ayaa markale isu daya xeelado cusub oo uu kusii waqti dheereysanayo, sabab la xiriirta kalsoonida shacabka oo u badaneysa dhinaca mucaaradka.
Soomaaliya ayuu dib uga celiyay Ciidamo booliis ah oo si gaar ah u tababaran oo tiro ahaan dhan 160, waxa Askar ku jirta diiwaanka Liiska Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM oo tababaro siiya Booliiska Dowladda Federaalka isla markaana ka caawiya dhinaca amniga.
Inta badan Askarta Midowga Afrika u diiwaangashan waxa ay ku baxaan badal lagu sameeyo, kahor inta aysan ka xirxiran Soomaaliya waxaa dalka soo gaara ciidamada lagu boos-buuxinayo si aysan faaruq dhanka ciidanka ah ugu imaan shaqada ay halaan.
Dowladda Uganda si rasmi ah uma caddeyn in askarta ay ka saartay Soomaaliya ay marisay xeerka nabad ilaalinta ah oo ah in badalkooda la diyaariyo kahor bixitaankooda, inta badan Xukuumadda Kampala ayaa maalmo kahor soo diri jiray askarta shaqo bilawga noqonaya si loo kala baro meelaha ay degayaan & halka shaqada ay u mareyso.
Doorashada Uganda ayaa ku beegan 14-ka Janaayo 2021 oo ah Khamiista Todobaadka Berri bilaabanaya waxaana ka dhiman muddo dhan 6-Cishe, waxaana socda diyaar garow Dowladda & mucaaradka ay kala duwaan si gacanta guusha ay u kala hantaan.